Ambohidratrimo: raikitra ny kilalao maloto amin’ny propagandy | NewsMada
Ambohidratrimo: raikitra ny kilalao maloto amin’ny propagandy
Efa tsy lalao politika intsony. Velon-taraina ary mahatsiaro tena iharan’ny antsojay ny kandidàn’ny IRD, Rakotoarisoa Jhonny, nirotsaka ao amin’ny distrikan’Ambohidratrimo. “Mandeha ny fandrahonana ho faty ny tenanay. Miteraka horohoro sy tahotra amin’ny vady aman-janaka sy ny fianakaviana izany nefa politika no atao. Angalarina amin’ny alina ny sora-baventy sy ny afisy na peta-drindrina ka apetaka eny amin’ny toerana voarara, toy ny biraom-panjakana na koa amin’ny rindrina tsy tokony hanaovana izany… Tena efa tafahoatra sy sangy mihoatra ny loha nefa politika ny atao” hoy izy, omaly.
Manaitra ny Ceni sy ny HCC
Tsy vitan’izany fa mandeha hatramin’ny kabary na lahateny fihantsiana na fanaratsiana any ambadika any. Nohitsiny fa fiketrehana tsotra izao hampihintsana azy amin’ny fifidianana izao fihetsika mamoafady ataon’ny sasany izao. Na izany aza, efa nametraka fitoriana olon-tsy fantatra eny amin’ny mpitandro filaminana ny tenany.
Etsy andaniny, manaitra ny eo anivon’ny Ceni sy ny HCC koa ity kandidàn’ny IRD ity mba handray fepetra henjana manoloana izany.
Manao adin’ny kanosa…
Nanteriny koa fa tokony hanao fifaninanana madio hosedrain’ny safidim-bahoaka fa tsy manao adin’ny kanosa sy miketrika ny fomba haminganana ny hafa tahaka izao. “Ento ny fandaharanasa hotsarain’ny mpifidy amin’ny hampandrosoana ny distrikan’Ambohidratrimo sy i Madagasikara fa tsy fihetsika tahaka izany na fanapotehana ny hafa no hambaboana ny vahoaka mpifidy”, hoy ihany izy.